November 3, 2020 adminLeaveaComment on विवाहको पहिलो रातमै श्रीमानले धेरै माया गर्न थालेपछि श्रीमतिले…
काठमाडौं । माया र यु’द्धमा हरेक कुरा जा यज हुन्छ भन्ने त हामीले सुनेका छौ । यो बीचमा अहिले माया प्रेम सम्बन्धि एउटा घटना बाहिर आएको छ । भएको के भने, एक महिलाले विवाहको एक वर्षपछि श्रीमानसँग सम्बन्धविच्छेद गर्ने सोच बनाएकी छिन् । सम्बन्धविच्छेद किन गर्न चाहिन् ? यसको कारण भने निकै रोचक छ । उनका अनुसार उनलाई श्रीमानले अ त्यधिक माया गर्ने, कहिले झ गडा नगर्ने भएकाले सम्बन्धविच्छेद गर्न चाहेकी हुन् । *** भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला ***
उनले अगाडी भनिन्, ‘उनीसँग एक दिन त झगडा होला भनेर सोच्थेँ तर मेरा रोमान्टिक श्रीमानले सधैं मलाई माफ गरे र उपहारको वर्षा गराए । मलाई वास्तविक छलफल र तर्क वितर्क मन पर्छ ।’ प्रारम्भिक सुनुवाइको क्रममा अदालतमा उपस्थित श्रीमानले चकित न्यायाधिसको सामू आफूले कहिले पनि गलत नगरेको बताए । दयालु र उत्तम श्रीमान् हुने उद्देश्यसहित आफूले यस्तो गरेको उनले बताए । उनले श्रीमतीलाई सम्झाइदिन अदालतलाई आग्रह गरेका छन् । अदालतले यी दुई पक्षलाई मिलनका लागि एउटा मौका दिएको छ । एजेन्सी । *** भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला ***
भर्खरै गर्यो सरकारले यस्तो निर्णय भोलि देखि फेरि १४ दिन कडा लकडाउन !
ड्राईभर भाई सुजनले बस चलाउँदा चलाउँदै यति राम्री प्रेमिका पाए । बसमै देखेर लभ पर्यो…. (भिडियो हेर्नुस)